कति छ त आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर ? हेर्नुहोस् कुन घट्यो कुन बढ्यो ? « Sansar News -->
२२ असार २०७७, सोमबार ०७:५८
२२ असार, काठमाण्डौं । नेपाली राष्ट्र बैंकले आजको विदेशी मुद्राको भाउ यसप्रकार तोकेको छ ।
बैंकका अनुसार आज (२२ असार, ६ जुलाई) को नेपाली बजारमा अमेरिकी डलर १ को खरिददर ११९ रुपैयाँ १२ पैसा र विक्रिदर ११९ रुपैयाँ ७२ पैसा रहेको छ । केही दिनदेखि निरन्तर घट्दै आएको डलरको भाउ आज पनि झण्डै ६० पैसा घटेको हो ।
यस्तै युरो १ को खरिददर १३३ रुपैयाँ ९९ पैसा र विक्रिदर १३४ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको छ भने युके पाउण्ड १ को खरिददर १४८ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रिदर १४९ रुपैयाँ ४७ पैसा रहेको छ । शुक्रबारको तुलनामा पाउण्ड र युरो पनि झण्डै २ रुपैयाँको हाराहारीमा घटेको हो ।
यस्तो छ अन्य मुद्राको भाउ
Exchange Rate for 06 July 2020
दिन प्रतिदिन घट्दो छ डलरको भाउ, हेर्नुहोस् कति छ त अन्य मुद्राको भाउ ?